Alahady – 14/12/2014 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Eo afovoanareo, misy olona anankiray izay tsy fantatrareo.
Nisy lehilahy anankiray nirahin’Andriamanitra, Joany no anarany ; tonga ho vavolombelona hanambara ny Fahazavana izy, mba hinoan’ny olon-drehetra noho ny teniny. Tsy izy anefa no Fahazavana fa tonga ho vavolombelona manambara ny fahazavana fotsiny izy. Ary izao no nambaran’i Joany raha naniraka mpisorona sy levita, avy tany Jerosalema, hankany aminy ny Jody mba hanontany azy hoe : “lza moa Ianao ?” Nilaza marina izy ka tsy nandà, fa nanao hoe: “Tsy i Kristy aho”. Dia nanontany azy izy ireo nanao hoe: “lza àry? i Elia va ianao?” Fa hoy izy: “Tsy izy aho”. Ary hoy ihany izy ireo: “llay mpaminany va ianao ?” Fa hoy ny navaliny :“Tsia”. Ka hoy izy ireo taminy: “lza ary ianao, mba hitondranay valy amin’izay naniraka anay ? Ataonao ho iza ny tenanao ?” Dia hoy izy : “lzaho no feo miantso any an’efitra hoe : Ahitsio ny lalan’ny Tompo, araka izay voalazan’i Izaia mpaminany”. Ary Farisianina ireo iraka ireo. Dia nanontany azy indray ireo ka nanao taminy hoe : “Nahoana ary ianao no manao batemy raha tsy i Kristy, na i Elia, na ilay Mpaminany ?” Ka novalian’i Joany hoe: “lzaho manao batemy amin’ny rano ; fa eo aminareo misy anankiray tsy fantatrareo, dia Ilay avy ao aoriako, ary tsy mendrika hamaha ny kofehin-kapany aza aho”, Tany Betania andafin’i Jordany, izay nanaovan’i Joany Batemy, no natao izany zavatra izany.